I-ELSKALIMBA 3K SUBSCRIBERS GIVEAWAY
Sanibonani nonke! Uyemukelwa kule Foramu yeKalimba, lapho wonke umdlali we-kalimba angabelana ngakho konke mayelana ne-kalimba .. Ngiyabonga kakhulu ngokujoyina lo mnikelo 🙂 Nginifisela inhlanhla nonke .. Futhi heyy, ake ungitshele ukuthi kungani ufuna ukuwina le Kalimba?
Isiqalo sesihloko Kubhalwe: 12/04/2021 1:55 pm
ngobe71, shefaarachma, 020308_y futhi abantu abangu-39 bathande
okunikezwayo elskalimba khulula kalimba kalimba Qina
Sanibonani ... Halala ...
Kubhalwe: 12/04/2021 3:25 pm
Nataliya futhi I-Meryaxian ithandiwe
Ngifunde neKalimba, angitholanga ngephutha ividiyo yakho ku-YouTube.
Kubhalwe: 12/04/2021 3:27 pm
Kukhona amakhongolose asevele ekhona
Inhlanhla njalo ❤
Kubhalwe: 12/04/2021 3:34 pm
Ngifuna ukunqoba ukunikela ngoba ngifuna ngempela ukufunda ukudlala umncintiswano njenge-ci els 🥰
Kubhalwe: 12/04/2021 3:49 pm
Siyakuhalalisela sisi ngokufeza lokhu, ngethemba ukuthi ngokuzayo uzophumelela futhi uqhubeke nokusebenza. Isizathu sokuthi ngifune ukuwina yingoba ngifuna ngempela ukuba neKalimba, ngiyazi ukuthi amakhono ami omculo asengaphansi kwesilinganiso, kepha ngifuna ngempela ukufunda insimbi yeKalimba. Kusuka ku-2020, ngifuna ukuyithenga kepha ayikaqedwa. Ngiyethemba ukuthi lokhu kuzoba yinhlanhla yami. Ngiyabonga sisi
Kubhalwe: 12/04/2021 3:51 pm
Sawubona Ate Els🥰🥳❤️
Ngifuna ukuwina lokhu ngoba ngiyakuthanda ukudlala i-kalimba futhi ngingajabula kakhulu ukusebenzisa omunye wegama elidumile, i-kalimbera😍 ithemba lokuwina
Kubhalwe: 12/04/2021 3:52 pm
Kuthunyelwe ngu: @ els-kalimba
Sanibonani nonke! Uyemukelwa kulengqungquthela yeKalimba, lapho bonke abadlali beKalimba bengabelana ngakho konke ngeKalimba .. Ngiyabonga kakhulu ngokujoyina lo mnikelo Nginifisela inhlanhla nonke .. Futhi he, ake ungitshele ukuthi kungani ufuna ukuwina le Kalimba?
ngoba ngifuna ukuba neKalimba Murai, ngoba iKalimba yinhle ikakhulukazi yenziwa e-Indonesia
Kubhalwe: 12/04/2021 3:53 pm
Sawubona !! Siyakuhalalisela ngo-3k !!! I futhi ngicabanga ukuthi ngifuna ukuwina ngenjabulo yayo haha
Kubhalwe: 12/04/2021 5:18 pm
Halala ngokufeza ababhalisile be-3k ... yiba nomdlandla futhi uphumelele ❤️
Unentshisekelo kuKalimba ngoba benginelukuluku lokusebenzisana nesigingci se-acoustic ..
Lokhu okuthunyelwe kwalungiswa onyakeni ongu-1 odlule ngu I-Arifin
Kubhalwe: 12/04/2021 10:38 pm
Sawubona, selamat yaa !! 💖
Kuthunyelwe: 13/04/2021 1:52 am
ngifuna ukuwina le kalimba ngoba anginayo i-kalimba😣 kepha ngifuna ukufunda i-kalimba🔥. ngicabanga ukuthi i-kalimba iyinsimbi yomculo ethakazelisa kakhulu futhi eyingqayizivele, yingakho ngifuna ukuyifunda futhi ngibe mkhulu njengawe🥰
Kuthunyelwe: 13/04/2021 2:23 am
Sawubona❤❣ Siyakubongela 3000 Subs🎉🎉✨
Kuthunyelwe: 13/04/2021 3:33 am
Siyakuhalalisela ngokubhalisile okungu-3K
Kungani ngifuna ukuwina le kalimba? Ngoba nginentshisekelo enkulu ngale nsimbi yomculo, ngifuna ukuqala ukufunda i-kalimba, ngikufisela inhlanhla ngaleli thuba.Ngivame ukubuka amavidiyo we-kalimbalist futhi ngithola ukuthula ku-kalimba ngokuthula umculo. Lokhu kuyajabulisa kakhulu futhi ungifisela inhlanhla els❤️
Kuthunyelwe: 13/04/2021 3:58 am
Gcina umdlandla, Els
Kuthunyelwe: 13/04/2021 4:01 am
I-Topic Tags: isipho (4), Elskalimba (1), khulula kalimba (1), Kalimbera (4), samurai kalimba (1),